Google Partners na Rasberi Pi iji bido Mebere Enyemaka | Akụrụngwa n'efu
Google Partners na Raspberry Pi iji bido nnyemaaka Virtual
Ọtụtụ n'ime anyị enweworị ngwaọrụ dị mma n'ụlọ anyị na-achịkwa ngwaọrụ ndị ọzọ n'ụlọ. Ogwu nke Amazon ikwughachi ma obu Google Home ma ahaziri. Ndị ọzọ na-ahọrọ ịzụta ngwaọrụ ha na Amazon ma ọ bụ Google. Otú ọ dị ugbu a, e nwere ihe ọzọ nwere ike, a iwu, kachasị na free ga-ekwe omume.
Google esonyela n'ahịa Pi na -emepụta ọrụ ngwaike Akụrụngwa. Ya mere, ha mepụtala onye enyemaka ụlọ na anyị nwere ike iwuli onwe anyị mana nke ahụ ga-enwe teknụzụ nke Google na Raspberry Pi.
Nke a mebere nnyemaaka akpọla ya VoiceKit ma ọ bụ ma ọ dịghị ihe ọzọ dị ka nke a akpọrọ ya web nke anyị ga-achọta ozi niile nke ngwaọrụ ahụ. Ngwaọrụ a nwere ike ịzụta site na mbipụta kachasị ọhụrụ nke MagPi.
VoiceKit bụ onye nnyemaaka izizi emere n'efu nke emepụtara na njikọta n'etiti Google na Raspi Pi
Magazin a bụ nke Raspberry Pi Foundation mebere ya na nke ikpeazụ wepụtara ihe owuwu ihe maka enyemaka a na-akwado ya, nke gụnyere ihe ndị dị ka bọọdụ Pi Zero W, ndị ọkà okwu, wdg. ị ga-enwe ike iji sọftụwia Google iji nwee ọrụ enyemaka na-arụ ọrụ na-enweghị nsogbu.
N'oge ahụ, site na magazin bụ naanị usoro iji nweta ihe enyemaka a na-enyere aka. Mana nke a bụ ihe emetụlarị n'ụgbọ Pi Zero na ọnwa ole na ole gachara, anyị malitere ịchọta ya n'ụlọ ahịa Libre Hardware. N'aka nke ọzọ Google kwadoro ya Ngwunye enyemaka a ga - abụ naanị ihe m ga - ebido na mmekorita ya na Pipe Pi. Mmasị ha nwere na bọọdụ ahụ bụ eziokwu ma ha ga-aga n'ihu ịmalite ọrụ gọọmentị na sọftụwia Google na akụrụngwa Raspberry Pi.
Eziokwu bu na MagPi siri ike iru kiosks Spanish mana ọ bụkwa eziokwu na ịnwe ngwaike na ngwanrọ n'efu, Anyị nwere ike iru onwe anyị nke a na-enyere aka Enweghị nsogbu ọ bụla, ee, anyị ga-abụrịrị obere ọrụ aka n'ihi na anyị ga-ebu ụzọ wuo kit ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » Ntu Pi » Google Partners na Raspberry Pi iji bido nnyemaaka Virtual
Otu ihe ahụ ruo mgbe ha wepụtara gam akporo arụ ọrụ maka piil pi.
Zaghachi Daniel Bum
Ekwadoro m isonye raspberị na ọdụm 2. Ọ na-abawanye nke ọma ma bụrụ nsonaazụ dị egwu na mbipụta 3D
Onye enyemaka Google na abia na ngwaike efu na ekele ya SDK